गुगल फोटोबाट कसरी गर्ने पुराना फोटो डाउनलोड?
Home सूचना-प्रविधि गुगल फोटोबाट कसरी गर्ने पुराना फोटो डाउनलोड?
गुगल फोटोले आफ्नो फ्री स्टोरेज सुविधा हटाउँदै छ। पाँच वर्षअघि सुरु भएको यो सुविधा अन्तर्गत गुगल आइडी प्रयोगकर्ताले निः शुल्क फोटोहरु राख्न पाउँथे।
टेक हिन्दुस्तानका अनुसार गुगल फोटोले सन् २०२१, जुन १ देखि फ्री स्टोरेज सुविधा दिने छैन। उक्त मितिदेखि गुगल फोटोमा निः शुल्क १५ जिबी स्टोरेज भने उपलब्ध हुनेछ। यो भन्दा बढी स्टोरेजको लागि प्रयोगकर्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
शुल्क तिर्नुको सट्टा आफ्नो फोटोहरु गुगल फोटोबाट अन्तै सार्न पनि सकिन्छ। यसको समाधान गुगल टेकआउटबाट गर्न सकिने टेक हिन्दुस्तानले बताएको छ।
गुगल टेकआउट यस्तो सेवा हो, जसको सहायतामा तपाईंले आफ्नो गुगल अकाउन्टको सबै एपबाट आफ्नो डाटाहरु एकै पटक रोजेर त्यसलाई ‘आर्काइभ’ गर्न सकिन्छ। अर्थात्, भविष्यमा फेरि पनि हेर्न सकिने गरी लुकाएर रेकर्डमा राख्न सकिन्छ।
गुगल टेकआउटको सहायतामा तपाईंले गुगल ड्राइभ फाइलहरू,सम्पर्क नम्बरहरु, युट्युब भिडिओहरु सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुगल फोटोबाट फोटोहरु डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
गुगल टेकआउट कसरी प्रयोग गर्ने?
१ यसको लागि तपाईंको गुगल अकाउन्ट लगइन हुनुपर्छ। त्यसपछि takeout.google.com मा लगइन गर्ने।
२ गुगल टेकआउटको वेभ साइट खुल्छ। यो खुलेपछि डिसेलेक्ट अल भन्ने विकल्प अगाडि आउँछ। यो छनौट गर्ने र क्लिक गर्ने। यसले तपाईंको गुगलको अरु एपबाट डाटा नहटोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ।
३ अब गुगल फोटो चयन गर्न स्क्रोल गर्ने।
४ तपाईंले सेलेक्ट गर्नुभएको पेजको सबैभन्दा तल नेक्स्ट स्टेप अर्थात्, अर्को चरण भन्ने विकल्पमा क्लिक गर्ने।
५ अब तपाईंले वर्षमा कति पटक आफ्नो डाटाहरु पठाउन, (एक्सपोर्ट) गर्न चाहनु हुन्छ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। विकल्पमा तपाईंले मासिक एक पटक अथवा दुई महिनामा एक पटक एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यतिबेला तपाईंले .zip फाइलमा अथवा .tgz फाइलमा राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
६ सबै कुरा चयन गरिसकेपछि क्रियट एक्सपोर्ट अर्थात्, पठाउने विक्लप हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने।
७ यसपछि गुगलले तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्न इमेल पठाउने छ। जसमा गुगल डाटाको आर्काइभ गर्न भनिएकाे हुन्छ यसमा तपाईले स्वीकृति जनाउनुपर्ने हुन्छ।
तपाईंको स्वीकृति अनुरुप अब डाटा निर्यातको प्रक्रिया शुरू हुन्छ। यसको लागि तपाईंको आर्काइभ गर्नुपर्ने डाटाको साइज अनुसार केही घण्टादेखि दिनसम्म लाग्न सक्छ।
एकपटक डाटा आर्काइभ र निर्यातको काम सकिएपछि गुगलले तपाईंको सबै डाटा इमेलमार्फत पठाइदिन्छ। अब तपाईंले ती फाइल, फोटोहरु ल्यापटप, मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा अन्य क्लाउड सेवा वा हार्डड्राइभमा पनि सारेर राख्न सक्नुहुन्छ।
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, ३ मंसिर बुधबार १६:४६ 0
खेलकुद खबर वाइड संवाददाता - २०७७, ३ मंसिर बुधबार १६:४६ 0
अन्तर्राष्ट्रिय खबर वाइड संवाददाता - २०७७, ३ मंसिर बुधबार १६:४६ 0
समाचार खबर वाइड संवाददाता - २०७७, ३ मंसिर बुधबार १६:४६ 0